Laaluush, Ballanqaad, Ciidan kala Wareejin iyo Fashil Cusub oo soo Foodsaaray Villa Somalia – Radio Daljir
Maarso 13, 2020 2:14 b 0
Taliyaha Ciidanka Daraawiishta Degmadda Afmadow ee gobalka Jubbada Hoose ayaa sheegay in uu fashiliyey khayaano iyo laaluush ay ka danbeeyeen Madaxda ugu sarreysa DFS iyo saraakiisha sare ee hay’adda Nabadsugidda dalka ee NISA.
Taliyaha ayaa sheegay in lacag caddaan ah loo soo direy, lagana ballanqaaday lacag doolarka Mareykanka oo kor u dhaafeysa malaayiin doolar iyo waliba deeganaansho dalka Turkiga haddii uu fuliyo dalabaadka DFS oo ay ugu horreyso in uu Ciidamada Daraawiishta ee Jubbaland ee aagga Afdmadow hoosgeeyo kuwa DFS.
Taliyaha ayaa warbixin berri laga baahin doono Jubaland TV ku shaaciyey in 10kii Maarso 2020 loo soo direy lacag laaluush ah oo dhan $80,000 USD (halkan riix oo arag riciitka lacagta), loogana soo diray Villa Somalia si uu u fuliyo dalabka Villa Somalia iyo saraakiisha hay’adda NISA, ahaana in Daraawiishta uu taliyaha ka yahay ee aaga Afmadow ay ku biiraan ciidamada DFS, kana qaybgalaan weerar lagu qaadi doono, lagulana wareegi doono magaaladda Kismaayo.
Taliyaha oo laga dalbaday in uu jaro isgaarsiinta Afmadow marka uu soo wareejinayo ciidamada Daraawiishta Jubaland ayaa sheegay in maalin kahor maalinta lacagta hormariska la soo dirayo, ahaydna 9kii Maarso 2020, loo soo direy $3,000 USD (halkan riix oo arag riciitka lacagta) ahna lacag loogu talagalay in uu ku buuxsado taleefoonka Tuurayada (Thuraya) ee ku shaqeeya satalaayt ka madaxbannaan kan isgaarsiinta Hormuud ee laga dalbaday in uu jaro.
Qoraalka Taliyaha Jubaland
Nuqul soo gaaray Radio Daljir ahna qayb qoraalka uu Taliyaha Ciidamada Daraawiishta Jubaland ee aagga Afmadow kaga warbixiyey dalabaadka DFS ayaa u qornaa sida hoose:
Bismillaah, marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed dal iyo dibadba, si gaar ah waxaan u salaamayaa bulshada reer Jubbaland ee saddexda gobol ku kala sugan.
1. Waxaanu nahay ciidan utaagan nabad iyo ilaalinta sharafta umada iyo nabada shacabka, sidaas ayaana kusoo shaqaynay mudo uguna adkaysano dhibaato badan oo nasoo martay.
2. Khilaafka joogtada ah ee maamulka Jubaland kala dhaxeeyey dowladihii hore iyo dowlada hadeer jirta, waxaan rajo ka qabnay n maamulka Jubaland uu layimaado maskax iyo talo soomaalinimo, oo lajaan-qaadi karto qaran soomaaliyeed, taasi Jubaland hogaankeeda wey ku fashilantay.
3. Ciidamada Jubbaland ee hadda jira waa hal qabiil sida Puntland iyo Somaliland oo kale marka waxaan rabnaa inaan noqono ciidan qaran oo qabiil kasta leh.
4. Sidaas darteed, laga bilaabo maanta Degmada Afmadow, maamulkeeda iyo ciidankeeda, waxay isku waafaqeen inay ka xorobaan maamulkan Jubaland, oo ay si toos ah u hoos tagaan ciidanka xooga dalka Soomaliyeed, magaalada Afmadow-na, ay noqoto magaalo ay wada leedahay umada soomaaliyeed oo idil.
5. Dowlada Federaalka, taliska xooga dalka, waxaan ka codsanaynaa iney nala soo xiriiraan, oo ay na diiwaangaliyaan, aan ka helno xuquuqdeena.
6. In maant laga bilaabo degmada Afmadow ay ka go’day Jubbaland toosn u hoos tageyso DFS halkaasna looga talin doono.
Qodobadaas markaan fuliyo wuxuu ii balan qaadey in qoyskeyga la iigu rarayo dalka Turkiga, halkaasna la iiga gadayo guri aan dego sidookalena lacag hal malyan ah hormaris la ii siin doono, asagoo igu yiri hadduu jiro qof Xamar kuu joogo oo aad ku kalsoontahay lacagtaas waan kuugu dhiibi karnaa, intaas wuxuu ii raaciyey anigu (Axmed) waxaan ahay ninkii 5ta Malyan ee Doolar u direy saraakiishii fulisey howlgalkii lagu soo afmeerayey Galmudugtii hore waxaana kuu hubaa inaad la shaqeynta Dowladaada aad baraare iyo barwaaqo ku gaari doonto.
Waan ka aqbaley waxaana gashey kalsooni badan kadib waxaa Laila soo xiriiriyey agaasinka Xafiiska hab maamuuska Madaxweynaha Yuusuf Cadaani lambar telefoonkiisuna yahay (0611555551)
Madaxweyne Farmaajo ayaa igu salaamey Jeneraal Mahad waan ku salaamey, waana kuugu hambalyeynayaa garab istaagaaga qaranka iyo inaad qabiil ka dooratey Dowladaada iyo dalkaaga, waa sida ay asaga markaas la tahaye, madaxweynuhu hadalkiisa waxa uu kusoo koobey in dalab kasta oo dhinaceyga ka yimaada la iifulinayo haddii aan fuliyo dalabaadka taliska nabadsugidu ii soo jeediyey, hadda kadibna inaan Caddaani lasoo maro waxkasta oo aan uga baahdo ayuu iigu soo koobey Madaxweynuhu hadalkiisa, waan aqbaley si kalsooni leh waliba, anigoo ka gungaaraya hadafka ay tiigsanayaan ee ugu danbeeya.
Intaas kadib waxaa dib iigu soo laabtey Axmed oo ahaa xiriiriyaha aniga iyo Fahad asagoo iisheegey in si loo fuliyo talaabooyinkii aan isku afgaraney ay barri oo ku aadaneyd maalintii Talaadada 10-Maarso-2020 la iisoo diri doono kharashaadkii aan ku howlgali lahaa oo dhan $100,000 ( Boqol kun oo doolar ), intaas waxaa la ii raaciyey haddii aad na khiyaanto waxaad mareysaa wadada Cabdirashiid Janan oo hadda u dhimanaya khiyaanadii uu nagu sameeyey doorashadii Jubbaland, maadaama uusan fulinin ballanqaadyadii uu noo sameeyey,
taasna tahay sababta illaa hadda aan u daba taaganahay una dhiman doonno aysanna jirin wax danbi oo kale oo loo haysto oo aan taas ahayn. Hadalkiisa asaga oo sii wata ayuu iyiri Kismaayo lacago badan ayaa nagaga baxey natiijadii aan ka rabneyna wali kamaanan gaarin marka sababta aan degmooyinka kale ugu wareegney fahan.
Maalintii Isniinta 9-Maarso-2020 ayaa waxaa ila soo hadley Axmed oo ii sheegey inay iiga baahinyihiin inaan damiyo dhamaan isgaarsiinta Afmadow iyo deegaanada hoos taga, si aan warka loo helin maalinta arbacada ku aadan ee aan ku ballaney inaan howsha fulino, sidaas awgeed waxay iweydiiyeen inaan haysto telefoonka loo yaqaano Tooreeyaha (Thuraya) ee ku shaqeeya khadka dayax gacmeedka (Sattelite) si aan ayaga ugala xariiro marka aan isgaarsiinta gudaha jaro kadib. Waxaan u sheegay inaan haysto telefoonkaas sidaas darteed ayaa waxay ii soo direen $3000 ( Saddex Kun oo doolar) oo ay ugu talagaleen inaan ku gato kaarka ku hadalka Tooreeyaha maadaama uu qaali yahay dalka gudihiisana aan laga helin.
Subixii xigtey ee Talaadada 10-Maarso-2020 ayaa la ii soo direy lacag dhan $80,000 ( Sideetan kun oo doolar) oo rasiidkeedii iyo cadeynteedii aad ka arki kartaan sawirka hoose.
Intaas marka ay noo mareyso lacagtiina aan xawaalada ka soo qaadey ayaguna ay iga sugayaan in aan tallaabadii aan ku ballaney ee ahayd inaan garoonka Afmadow la wareego isgaarsiinta jaro ayaan joojiyey xiriirkii halkaasna gabi ahaanba kusoo afmeerey maaweelo caruureedkii maalmaha kooban socotey, kadib markaan amar ka helay madaxweynaha Jubbaland mudne Axmed Maxamed Islaam oo min bilow ilaa dhamaad sheekada aan la socodsiinayey maalinba halka ay mareyso la jilitaankeedana aan isku ogeyn, lacagtii dhamaanteed waxaan ku shubay qasnada wasaarada Maaliyada Jubbaland oo ayadu leh maamulka iyo maareynta lacagtaas.
Markaan joojiyey xiriirkii aan wax jawaab ah siin waayey waxay iisoo direen farriimo hanjabaad ah oo ay igu leeyihiin inaan noqon doono dambiile ay hay’adaha caalamiga ahi baadi goobi doonaan dhegna jalaq uma siinin.
Waxaan shacabka, Saraakiisha ciidamada qeybahooda kala duwan iyo madaxda Jubbalandba kula dardaarmayaaa uguna baaqayaa adkeynta midnimadooda iyo inaynan sharaftooda, damiirkooda iyo dadnimadooda shilimaad barri dhamaan doona aysan ku gadanin.